Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Airport » Caadi ahaan Ku soo Laabashada Garoomada Caalamiga ah ee Jamaica
Mudane. Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica - sawirka waxaa leh Wasaaradda Dalxiiska ee Jamaica
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa soo dhaweeyay warka sheegaya in caadi ay ku soo laabatay Jamaica labada garoon ee caalamiga ah ka dib falkii warshadaha ee maanta ay sameeyeen shaqaalaha hagayaasha hawada ee jasiiradda.
The Dalxiiska Jamaica Wasiirka ayaa yiri: "Waxaan bogaadinayaa tallaabada degdega ah ee ay qaadeen Hay'adda Duulista Rayidka ee Jamaica (JCAA), Wasaaradda Shaqada iyo Amniga Bulshada, Wasaaradda Maaliyadda iyo Adeegga Dadweynaha iyo dhammaan dhinacyada kale ee ku lugta leh xallinta arrinta si howlaha caadiga ah ay u suurtagasho. Ku soo noqoshada Garoomada Caalamiga ah ee Sangster iyo Norman Manley.”
"Qaybta dalxiiska waxaa ka go'an inay qaybteeda ka qaadato xaqiijinta soo kabashada dhaqaalaha Jamaica."
Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan doontaa talada iyo taageerada dhammaan shuraakadayada. Hadda oo arrintii la xalliyay waxaan ku kalsoonnahay in waaxda dalxiiska waxay ka soo kaban doontaa xaalad kasta oo xaaladdani ay sababtay waxayna sii wadi doontaa inay hore u socoto," ayuu yidhi wasiir Bartlett.
"Waan ogahay inay maalin niyad jab ah u ahayd dadka safarka ah ee Jamaica. Waxaan si daacad ah uga cudur daaraneynaa dhibka ay keentay carqaladeyntaan, waxaana rajeyneynaa inaan mar kale ku soo dhaweyno rakaabka hawada jasiiradda," ayuu raaciyay.
In ka badan 40 duullimaadyo ganacsi oo u adeegi jiray Garoomada Caalamiga ah ee Sangster iyo Norman Manley ayaa maanta la baajiyay iyadoo maamulka hawada ee jasiiradda ay qaadeen tallaabo warshadeed, taasoo billaabatay saaka.
Wasaaradda Dalxiiska ee Jamaica iyo hay'adaheeda ayaa hadaf u ah kor u qaadista iyo wax ka beddelka wax soo saarka dalxiiska Jamaica, iyada oo la hubinayo in waxtarrada ka imanaya waaxda dalxiiska loo kordhiyo dhammaan dadka reer Jamaica. Si taas loo gaaro waxay hirgelisay siyaasado iyo istiraatiijiyado siin doona dardar dheeraad ah dalxiiska oo ah mashiinka koritaanka dhaqaalaha Jamaica. Wasaaraddu waxay weli u heellan tahay inay hubiso in waaxda dalxiisku ay gacan buuxda ka geysato horumarinta dhaqaalaha Jamaica iyada oo la siinayo wax soo saar badan.